Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2016 | May
အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ပြန်လာပြီ
မန္တလေးမြို့မှာ အခြေစိုက်တဲ့ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ တတိယပတ်မှာ အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပအပြီး ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပါတယ်။
အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက စာရေးဆရာဆူးငှက်ကို ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး လူငယ်စာရေးဆရာ သတင်းစာဆရာတွေနဲ့ စာပေနယ်မှာ လက်ရှိရေးသားနေကြတဲ့ စာရေးဆရာတွေလည်း အမှုဆောင် အဖြစ် အရွေးချယ်ခံခဲ့ကြတယ်။ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။
အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ စာပေလောကအကျိုးအတွက် ဘာတွေ သယ်ပိုးကြမလဲ စတဲ့ မဆုံးနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းက အခုမှ မိုးကျ ပင်ပေါက်တွေလို ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အသင်းမဟုတ်ဘူး။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကတည်းက မန္တလေးမြို့က စာရေးဆရာတွေ အင်နဲ့အားနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အသင်းကြီးဖြစ်တယ်။ တော်စိန်ခို၊ ကျောက်စာဝန်ဟောင်းဦးမြ၊ သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ ဆရာတော် ရွှေကိုင်းသား၊ ပါမောက္ခ ဦးကျော်ရင်၊ လူထုဦးလှ၊ လူထု ဒ်ါအမာ စတဲ့သူတွေ ၀ါယမစိုက် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကြတယ်။
အဲဒီ အသင်းကြီးကပဲ စာဆိုတော်နေ့တွေရောက်တိုင်း မြို့လူထုက မော်ကြည့်ရတဲ့ စာတမ်းပေါင်းများစွာကို အနောက် ကျုံးလမ်းက ဓမ္မဗိမာန်မှာ ဖတ်ခဲ့ကြတယ်။ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ဗမာသံတွေ ပျောက်ကုန်ပြီ၊ မြန်မာ့ဖန်ကျီ လုပ်ငန်း ၊မောင် စွမ်းရည်ရဲ့ ဗမာစာပေ ဘာလဲဘယ်လဲ စတဲ့ စာတမ်းတွေဟာ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ဓမ္မဗိမာန် အလုပ် စခန်းက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်။
အခုအခါ စကားပြောသလို ရေးကြတယ်ဆိုတာ မဆန်းပေမယ့် အဲဒီခေတ် အဲဒီအခါက ဗမာစာပေ ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုပြီး တံဆိပ်ကပ်ခံခဲ့ရတယ်။ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းက “ပြောသလိုရေးမယ်” ဆိုတဲ့ မူကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး စာပေကို လူထုကြားရောက်အောင် လမ်းဖောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီမူက ဆင်သွားလမ်းဖြစ်မူ အဖြစ် စာပေနယ်မှာ ထင်ရှားတယ်။
အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းက ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေရဲ့ အသီးအပွင့်အဖြစ် မောင်သာနိုး၊ တက္က သိုလ်မောင်စောလွင်၊ မောင်မိုးသူ၊ မောင်သိန်းနိုင်၊ မောင်လေးအောင်၊ မောင်စွမ်းရည်၊ တက္ကသိုလ် မောင်ထွန်းဝေ၊ တင်မိုး၊ ကြည်အောင်၊ ကိုလေး(အင်းဝ ဂုဏ်ရည်)၊ ဘုတလင် ချစ်လေး၊ မောင်ပေါက်စည် စတဲ့ မန်းတက္ကသိုလ် စာပေ မျိုးဆက်ကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် တော်လှန်ရေးကောင်စီ တက်လာချိန်မှာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို နိုင်ငံတော်ရဲ့ တခုတည်းသော ဦးဆောင် ပါတီအဖြစ် ထားရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့ အားလုံးကို ပါတီရဲ့ ထီးရိပ်အောက် သွပ်သွင်းခြင်း ခံလိုက်ရတယ်။ အထက် ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းက မဆလရဲ့ ထီးရိပ်မခိုဘဲ အသင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကို ယာယီရပ် ဆိုင်းလိုက်တယ်။ (ယာယီဆိုပေမယ့် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော် ဘာလှုပ်ရှားမှုမှ မလုပ်နိုင်ဘဲ ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ရပါတယ်။)
အခု ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်လာချိန်မှာ တချိန်က သြဇာရှိခဲ့တဲ့ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ပြန်လည် အသက် ၀င်လာပါပြီ။ အသင်းရယ်လို့ ပီပီပြင်ပြင် မဖြစ်ခင်မှာ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌအဖြစ် ညီပုလေးနဲ့ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင်တွေက ညီစေမင်း၊ ကျော်ရင်မြင့်၊ ဆူးငှက်၊ သိုက်ထွန်းသက်၊ ညို ထွန်းလူ၊ ကိုရိုးကွန့်စတဲ့သူတွေ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။
ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီက အစည်းဝေးတွေ အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ မူဝါဒတွေ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အညီ ချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း အမည်ယူထားပေမယ့် တနိုင်ငံလုံးက စာရေးဆရာ၊ ဓာတ်ပုံဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ သုတေသီ၊ ကာတွန်းဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ သတင်းစာဆရာတွေ
ရှေးယခင် လူကြီးတွေရဲ့ ကောင်းမွေတွေကို ဆက်ခံမှာမို့ မူလအမည်၊ မူလရည်ရွယ်ရွယ်ချက်၊ မူလဖွဲ့စည်းပုံတွေအတိုင်း သန္ဓေမပျက်အောင် မတို့မထိ ထားရှိတာပါ။ စာပေနဲ့ဆိုင်တဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ သုတေသန စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေးတွေ ကျင်းပကြမယ်။ အခါအားလျော်စွာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်တွေ ထွက်ကြ မယ်။
စာပေဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာ ဖော်ထုတ်ရေး၊ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အတူ လုပ်ဆောင်ရေး စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေလည်း လုပ်ကြမယ်။ အသင်းကြီးကို ရှေးမူတွေအတိုင်း သီးခြားလွတ်လပ်ပြီး အမှီ အခိုကင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ၀င်လိုသူတွေက ပတ်စ်ပို့ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ၊ နှစ်စဉ်ကြေးနဲ့ အသင်းဝင်ကြေး ကျပ် ၆၀၀၀နဲ့ အတူ အသင်းဥက္ကဌ ဆရာဆူးငှက်ထံမှာ အသင်းဝင်အဖြစ် ၀င်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းက တတပ်တအား ပါဝင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ငွေအား လူအား ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေကို ကြိုဆိုနေပါတယ်။
The post အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ပြန်လာပြီ appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/25tMndl http://ift.tt/1OYtTeJ
Posted in Press	| Tagged Feedly, IFTTT, Press	| Leaveacomment |
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွင်းပြဿ နာ မဖြေရှင်းပါက ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်နိုင်ဟု ဆို
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအတွင်းပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းပါက ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ အနားပေးခံရတဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဟောင်းတွေက နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပြီးနောက် အနားပေးခံလိုက်ရတဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေက ပါတီရဲ့ ပြဿနာဟာ ပါတီအတွင်းမှာပဲ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆက်စပ်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ အနားပေးခံရတဲ့ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဟောင်း ဦးဇော်မြင့်ဖေက ပြောဆိုပါတယ်။
“ဒီလိုကြီးမားတဲ့ ပါတီက သူ့ပြဿ နာကို သူ့အဝိုင်းအဝန်းထဲမှာ မထိမ်းနိုင်ဘဲ ဘောင်ကျော်လာခဲ့ရင် နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကို တနည်းမဟုတ် တနည်း ဆက်စပ်ပြီးတော့ ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အတွက် အခုတကြိမ်လည်း မီဒီယာ ခေါ်ပြီးရှင်းလင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရုံးချုပ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ည သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် အင်အားသုံးစီးနင်း ခံရပြီးနောက် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ အနားပေးခံရခြင်းရဲ့ အကြောင်း အချက်အလက် ဖြေရှင်းရန်၊ ပါတီညီလာခံတရပ် ကျင်းပရေးစတာတွေကို တောင်းဆိုနေခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ အနားပေးခံရတဲ့ ပါတီဝင်ဟောင်းတွေဆီက သိရတာပါ။
“ကျနော်တို့တတွေက ဒါကိုမှန်မှန်ကန်ကန် ရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေအရလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ပါတီ ပထမညီလာခံစုံညီ ခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုနေတာ၊ ဒီနေ့လည်း နောက်ဆုံးအကြိမ် တောင်းဆိုပြီးတော့ ဒါကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကျနော်တို့ပြောတာပါ”လို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ အနားပေးခံထားရသူ ဦးအေးမောက်က ပြောပါတယ်။
အရင် အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် ညသန်းခေါင်ယံ အာဏာသိမ်းပွဲလို့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အတွင်ရေး ပြဿနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌဟောင်း သူရဦးရွှေမန်း အပါအဝင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ၁၅ ဦးကို ပါတီက အနားပေးလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကြား စာတွေ ရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကနေ အနားပေးခံရသူတို့အနေနဲ့ ပါတီညီလာခံကျင်းပနိုင်ဖို့ မီဒီယာကနေ တဆင့် တောင်းဆိုမှု (၄) ကြိမ်အပြင် ဒီနေ့ မေလ ၃၀ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းကလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိန်၊ ဗဟိုကော်မတီဝင်များ၊ ပါတီဝင်များ၊ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ပြည်သူများ၊ သက်ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို လိပ်မူကာ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင် ထုတ်ဝေခဲ့ပေမယ့်လည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဘက်မှ သတင်းထုတ်ပြန်မှု မရှိသေးပါဘူး။
The post ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွင်းပြဿ နာ မဖြေရှင်းပါက ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်နိုင်ဟု ဆို appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1X8wLL2 http://burmese.dvb.no
နကသအဖွဲ့ကို ဒဂုံတက္ကသိုလ် သမဂ္ဂက ကန့်ကွက်
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (န.က.သ) ကို တစ်နိုင်ငံလုံးက ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားမပါဘဲ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက်ကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂက မနေ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
(န.က.သ)ဟာ ကျောင်းသားထုညီလာခံကနေ ရွေးချယ်တင်မြှောက်တာ မဟုတ်သလို ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေကို ကြိုတင်အသိပေးတာ ဆန္ဒသဘောထားတောင်း ယူတာ မရှိဘဲ ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက်တာဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ကိုမင်းသုခက ပြောပါတယ်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂအနေနဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်သားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချပ် (န.က.သ) အဖွဲ့မှာ ပါဝင်မှာမဟုတ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကို နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ၊ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန နဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အသင်းအဖွဲ့အားလုံး ထံ ပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(န.က.သ) ကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တကသနဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (မြေလတ်ဒေသ) တို့ ပူးပေါင်းပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၅ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/1sn3G1i http://www.rfa.org
ရှမ်းနဲ့ တအာင်းလူမျိုးတွေ ချစ်ခင်စွာနေထိုင်ကြဖို့ TNLA တိုက်တွန်း
တအာင်းလူမျိုးနဲ့ ရှမ်းလူမျိုးအကြား လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေ မဖြစ်အောင် ဒေသခံပြည်သူအချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံနေထိုင်ကြဖို့ ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF/TNLA က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မနေ့က ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့မှာ ဒေသခံရှမ်းလူမျိုး တစ်ထောင်ကျော်က TNLA ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အပေါ် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ တအာင်းနဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေအကြား ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက် တိုက်တွန်းလိုတာဖြစ်တယ်လို့ TNLA က ဗိုလ်မှုးကြီးမိုင်းဖုန်းကျော်က ပြောပါတယ်။
"ကျောက်မဲမှာရှိနေတဲ့ ရှမ်းပြည်သူလူထုတွေကတော့ RCSS ကပြောထားတာတွေရှိတော့ သူတို့အနေနဲ့ ဆန္ဒပြတာပေါ့၊ သူတို့ဆန္ဒပြပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့စိုးရိမ်တာက ကျနော်တို့ တအာင်းလူမျိုးတွေက မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ အခြေအနေပိုရှုပ်သွားမှာစိုးလို့ ကျနော်တို့ဖက်ပဲ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြီးတော့မှာ ကျနော်တို့လူထုတွေကို နားမရောင်ဖို့၊ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်ပြဿနာတွေပိုရှုက်လာရင် နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်းရတာပိုခက်နိုင်တယ်၊ ရှမ်းပြည်သူလူထုတွေက သူတို့သွေးပူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်၊ သတင်းအမှန်မရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်၊ အချိန်တန်ရင်တော့ ဒါတွေကပြေလည်သွားမှာပါ"
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဖက်မှာ TNLAနဲ့ RCSS/SSA အဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ရာမှာ TNLA အဖွဲ့က ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ဖိနှိပ်တာတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုပြီး မနေ့က ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မိုင်းဝီးဒေသ ဟိုပန်ကျေးရွာမီးလောင်မှုဟာ TNLAက ရှိ့တာ မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ အစိုးရ တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်မှာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ တာဖြစ်ကြောင်း ၊ ဒါ့အပြင် ညောင်မောင်း ဆရာတော်နဲ့ ဒေသခံတွေ TNLAက သတ်တယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အတွက် ဆရာတော်နဲ့ ဒေသခံတွေကို TNLA အဖွဲ့က သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့အတူ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/1TQjJO8 http://www.rfa.org
Posted in LAWS - ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Education, Feedly, IFTTT, Laws, RIghts	| Leaveacomment |
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးဌေးဦး(ဓာတ်ပုံ – မင်းမင်း၊ မဇ္ဈိမ)
ဟင်္သာတ၊ မေ ၂၉ ။ ။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး၏ ဟင်္သာတမြို့နယ်တွင်း ခရီးစဉ်များတွင် လမ်းကြောင်း လုံခြုံရေးယာဉ်တန်း ပေးအပ်ထားဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေမှုမှာ မဟုတ်ဟု ဟင်္သာတမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးတိုးဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
"လုံခြုံရေးယာဉ်တန်းကော တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ လိုက်ပါခြင်း မရှိပါဘူးခင်ဗျ။" ဟု ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဟင်္သာတမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကိုကိုက ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြ မေးမြန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဟင်္သာတမြို့ရှိ ဦးဌေးဦး၏ နေအိမ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက "အဘ လာရင်တော့ သူစီးနေကျ ကားနှစ်စီးအပြင် မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ကားတွေ ပါတာတွေ့ရတယ်။ တစ်ခြားကားတွေလည်း တွေ့တာပေါ့။ အရင်လတွေကအထိ သူလာရင် မော်တော်ပီကယ်ပါတယ်။ မော်တော်ပီကယ်တွေက ရွှေစေတီလမ်းနဲ့ ဈေးကလေးလမ်းဆုံတဲ့ အဘအိမ်နားက လမ်းဆုံမှာ စောင့်ရတယ်။ အခုတစ်ခေါက်တော့ မော်တော်ပီကယ်တို့ လုံခြုံရေး ရဲတို့ ကျနော်လည်း မတွေ့မိသလိုပဲဗျ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ခယက ကားနဲ့ တစ်ခြားကားတွေ ပါလာတာတွေ့ရတယ် ခင်ဗျ။ မှတ်မှတ်ရရ သူတိုင်းမှူး စဖြစ်ခါစ ပထမဆုံး အခေါက်ကဆို သူလာရင် ရပ်ကွက်ထဲ ဝင်ထွက် သွားလာခွင့် ပိတ်တယ်ခင်ဗျ။ သူပြောလိုက်ပုံရပါတယ်။ နောက်တော့ လုံခြုံရေးကားတွေ ပါလာတာ မတွေ့ရသလို သူလိုကိုယ်လိုပဲ ညဘက်ကြီးလည်း ရောက်ချလာတာပါပဲ" ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဥက္ကဌ ဦးဌေးဦး အနေဖြင့် ဟင်္သာတမြို့နယ်သို့ သွားလာရာတွင် လုံခြုံရေးယာဉ်တန်း လိုက်ပါမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပြီး ဝေဖန်သံများ ရှိနေသည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/1PakOl0 http://ift.tt/1nfHMox
ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားပါတီများ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဖွဲ့စည်း
ရှမ်းပြည်နယ်က နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ခု ပူးပေါင်းပြီး ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသား ပါတီများအဖွဲ့ချုပ်ကို ဒီနေ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် Orchit hotel မှာ ရှမ်းပြည်နယ်က နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ပြီး ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုပါတီ ဥက္ကဌ ဦးစောသန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အခါ ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားပါတီများအဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ မူဝါဒတွေကို ဆွေးနွေးအတည်ပြုသွားမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ ဝ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုပါတီ၊ အင်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ချုပ် စတဲ့ ပါတီ ၁၃ ပါတီတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပါတီ ၁၈ ခုကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပေမယ့် ဒီကနေ့ အစည်းအဝေးကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLDနဲ့ တခြားပါတီတချို့ က ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/1U6powP http://www.rfa.org
မေ ၂၉၊ ၂၀၁၆ – မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင်အောင် တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်၊ အရင်အစိုးရတွေလက်ထက် တိုင်းရင်းသားမြေယာတွေကို အတင်းကြပ်သိမ်းယူခဲ့တဲ့ မြေယာပဋိပက္ခတွေကို အရင် ဖြေရှင်းဖို့ လိုမယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြေယာအရေး လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသူ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/25sdIML http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Land Rights - မြေယာနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Feedly, IFTTT, Lands	| Leaveacomment |
တကယ်တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ပဋိပက္ခ၊ တစ်နည်း နိုင်ငံရေး ပြသနာ ပြေလည်ရေး ဆိုတာ တစ်နေ့ တစ်လ၊ တစ်နှစ်နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ပြီးနိုင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန် ဘယ်လောက်ကြာမလဲ ဆိုတာကိုလည်း ဒီကနေ့ အချိန်ထိ ဘယ်သူမှ မမှန်းဆနိုင်သေးပါဘူး။
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/25sdPrK http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Feedly, IFTTT, Lands	| Leaveacomment |
Posted on May 28, 2016 by freeburma
via သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/1TOUn4F http://ift.tt/Tf1V41
တိုင်းရင်းသားဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ မြေယာ ပဋိပက္ခတွေအကြောင်းနဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအရေး အကြောင်းအရာတွေကို ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြေယာအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ဒေါ်ဘောက်ဂျာနဲ့ ကိုသားညွန့်ဦး တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ Originally published at – http://ift.tt/1qRYAsw
via VOA Burmese (uploads) on YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CQbhnJc5pQQ https://youtube.com/playlist?list=UUv-YbGueeYCp8_CdjgXQD3A
Posted in Ethnics - တိုင်းရင်းသားများဆိုင်ရာ	| Tagged Ethnics, Feedly, IFTTT, Lands	| Leaveacomment |
Posted in Land Rights - မြေယာနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ရာ	| Tagged Ethnics, Feedly, IFTTT, Lands	| Leaveacomment |
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/1qQHMSC http://ift.tt/Tf1V41
တွေ့ဆုံစဉ် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ကိစ္စ၊ လက်နက်မှောင်ခိုကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ဗန်ကောက် မြို့ရှိ တပ်မတော်ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနချုပ် Armed Forces Development Command သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့ လာကြသည်။
ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနချုပ်ကို ဗန်ကောက် မြို့တွင် အခြေစိုက်ပြီး စစ်တိုင်းကြီး ငါးတိုင်းတွင် ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်များ ဖွင့်လှစ်ထားကာ ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကျေးရွာ အုပ်စု ၃၆၈ စုရှိ ဒေသခံ ထိုင်းပြည်သူလူထု၏ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေချောမွေ့ စေရေးနှင့် သဘာဝဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ် ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် အဖွဲ့ဝင်များ နှင့်အတူ ညနေပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာလာရာ ည ၇ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြသည်။
via Myanmar Info Minst http://ift.tt/1sDwfHM http://ift.tt/1KnLGaX
၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံသည် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဖြစ်ဟု အစိုးရပြောဆို
မေ ၂၇ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်။ စောထွန်းလင်း
၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံသည် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံသာ ဖြစ်သည်ဟု နေပြည်တော်ရှိ၊ Horizon Lake View Resort ၌ ယနေ့ စတင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC)၏ ပထမဆုံး အစည်းအ ဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
မေလ ၂၇ရက်မှ ၂၈ရက်နေ့အထိ နှစ်ရက်ကြာ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး UPDJC ၏ ယနေ့ အစည်းအဝေးတွင် UPDJC ဥက္ကဌအ ဖြစ် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒုဥက္ကဌအဖြစ် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေတို့က ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နေသူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းက ကေအိုင်စီသို့ ယခုလို ပြောသည်။
“ဒီနေ့ အစည်းအဝေးမှာ NLD အစိုးရရဲ့ပေါ်လစီသဘောထားတွေ ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံဆိုတာ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီ လာခံ ဖြစ်တယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမူဘောင်ကိုတော့ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်မယ်။ ဒါတွေကို ဆွေးနွေးတယ်။ မနက်ဖန် အစည်းအဝေးမှာ UPDJC ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုကို တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့ကတော့ စာရင်းတင်လိုက်ပြီး။ အစိုးရဘက်ကလည်း စာရင်းတင်လိုက်ပြီး။ ပါတီတွေဘက်ကတော့ မပြီးပြတ်သေးဘူး။ မနက်ဖြန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပဒိုကွယ်ထူးဝင်းက ပြော သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ၈ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ဦး၊ အစိုးရဘက်မှ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ UPDJC ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “အခု အစည်းအဝေးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ဆက်လက်ပြီး ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအတွက် ပြင်ဆင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ က ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံနဲ့ ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို တစ်ခုစီဖြစ်မှာလားလို့ မေးကြပါတယ်။ တစ်ခုတည်းပါ။ နာ မည်နှစ်ခုသုံးတယ်ဆိုတာက ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဆိုတာ အင်မတန်မှ တင့်တယ်ပြီး အများနှစ်သက်တဲ့ နာမည် ဖြစ်သလို ၂၁ရာစုပင်လုံ ဆိုတာကလည်း အများနှစ်သက်တဲ့ဟာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးက အတူတူပါပဲ”ဟု အမှာစကား ပြော ဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၀ကျော်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်တခုခု၌ အနည်းဆုံး တစ်ရာ အနိုင်ရသည့် ပါတီကိုသာ ပါဝင်ခွင့်ပြုရန် အစိုးရသစ်အနေဖြင့် မူဝါဒရှိသလို ကျန်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖိုရမ်တစ်ခုပြုလုပ်ကာ ယင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုရန် စဉ်းစားထားသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်ပြော သည်။
လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက် UPDJC တွင် ကိုယ်စားလှယ်များ ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် အပစ်ရပ်စာချုပ်ပါအတိုင်း နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ဦးကို ပါဝင်ခွင့် ပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်း ၁၆ဦးကို နိုင်ငံရေးပါတီများက မိမိတို့ဖာသာရွေးချယ်ကြရန် လိုသည်ဟု ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းကပြောသည်။
UPDJC အစည်းအဝေးကို မေလ ၂၈ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကော်မတီဝင်များကို အတည်ပြုခြင်း နိုင်ငံ ရေးဆွေးနွေးပွဲ မူဘောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးသွားရန်ရှိသည်ဟု ကော်မတီဝင်များထံမှ သိရသည်။
via Karen Newsletter http://ift.tt/1UbgvBW http://kicnews.org
အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများကို ဗီဇာလွယ်ကူရေးဆောင်ရွက်ပေးမည်
နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံတွေဆီ ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်း တွေ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လွယ်ကူစွာရရှိရေးနဲ့ ပြည်နေခွင့်ပိုမိုရရှိရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေရဲ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကို နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ ပါဝင်လာစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ရက် ၁၀၀ စီမံချက် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ ပြန်ကြားရေးက ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဒု-၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်က “ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသားဟောင်းတွေပေါ့နော် သူတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာမယ်ဆိုရင် ၂၈ ရက်လောက်ပဲ ခွင့်ပြု တဲ့ social visit (လူမှုရေးအလည်အပတ်) ပေါ့။ အဲဒါထက် ပိုမိုကြာကြာ သုံးလတန်သည်၊ ၆ လတန်သည် တိုးမြှင့်ပြီး ကြာကြာနေခွင့်ရဖို့၊ သူတို့လျှောက်လွှာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပိုမို လွယ်ကူလျှင်မြန်သွက်လက်စေဖို့ ဖြေလျှော့ပေးမှုတွေ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လုပ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။”
“ပြည်ပမှာ နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်။ အဲလိုနိုင်ငံကနေပြီးတော့ စီးပွားရေးဘက်မှာရော၊ ပညာရေးဘက်မှာရော၊ အဲလိုလူမျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးထဲမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။”
“ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက် သက်သက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ပိတ်ပင်ထားတာသက်သက်ဆိုရင် အဲလိုလူတွေ ပြန်လာခွင့်ရအောင် ကျနော်တို့အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီး ရက် ၁၀၀ အတွင်း အဆင်ပြေအောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောကြားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် အမည်မဲစာရင်း (black list) ထည့်သွင်းခံ ထားရသူတွေကို စာရင်းမှထုတ်ပယ်နိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးတွေဟာ မိဘအိမ်သဖွယ် ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အားကိုးရာ ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်မှုတွေ ကိုလည်း ရက် ၁၀၀ အတွင်း ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ်လိုို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ပြည်ပတွင်လက်ရှိတာဝန် ထမ်းဆောင် နေကြတဲ့ မြန်မာသံအမတ်ကြီးတွေ၊ သံရုံးအကြီးအကဲ တွေကို နေပြည်တော်မှာဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှာဖြစ်စေ မကြာမီ စုပေါင်းခေါ်ယူတွေ့ ဆုံပြီး ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ တရားဝင်အကျိုးစီးပွားတွေ ကာကွယ်ပေးဖို့၊ အစိုးရသစ်ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ မူဝါဒတွေအသိပေး ပြောကြားဖို့နဲ့ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ပြည်ပမှာ နိုင်ငံသားတွေ အလုပ်လုပ်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာအိမ်ရှင် နိုင်ငံတွေရဲ့ ဥပဒေစည်းမျဉ်း တွေ၊ နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ အကာအကွယ်တွေ ရရှိအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်တွေသွားရောက်ရေး၊ သံတမန်တိုးချဲ့ရေး၊ နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်တွေ ပြည်တွင်းခရီးသွားလာ၊ ပြည်ဝင်ဗီဇာ၊ ပြည်နေခွင့်တွေ လွယ်ကူစေရေး၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများအတွက် နိုင်ငံခြားရေးရာ မူဝါဒကော်မတီရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ဖြေလျော့ပေးရေးတွေကိုလည်း အကောင်အထည် ဖော်သွား မယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ နိုင်ငံတကာပုံရိပ် ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာရေးကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ အဓိကအလေးပေး ဆောင်ရွက်သွား မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
The post အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများကို ဗီဇာလွယ်ကူရေးဆောင်ရွက်ပေးမည် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/20HpQGo http://burmese.dvb.no
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Intelligence, RIghts	| Leaveacomment |
သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို ဝေဖန်ရေးသားသည့် ဆောင်းပါးရှင် တရားစွဲခံရ
အောင်လွင် (ကံပေါက်သား) ရေးသားခဲ့သည့် ဆောင်းပါး (ဓာတ်ပုံ- Dawei Watch)
သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများမှ ထွက်လာသည့် ရေဆိုးများကြောင့် ငါးမျိုးစိတ်များ သေဆုံးရသည့် အကြောင်း ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည့် အောင်လွင် (ကံပေါက်သား) ကို DELCO ကုမ္ပဏီက အသရေဖျက်မှု ပုဒ်မ ၅၀၀ ဖြင့် တရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
“ငါးရံတကောင် ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ” ဟု ခေါင်းစဉ်ပေးထားသည့် ဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့သူ အောင်လွင် (ကံပေါက်သား) ကို ကံပေါက်ဒေသတွင် သတ္ထုတူးဖော်ရေး လုပ်ကိုင်နေသည့် DELCO ကုမ္ပဏီက တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူမြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း၊ တရားရုံးတွင် ချုပ်ရက်ရမန် ရယူထားကြောင်း တရားစွဲခံရသူ ဦးအောင်လွင်က ပြောသည်။
ဆောင်းပါးရှင် အောင်လွင် (ကံပေါက်သား) သည် Dawei Watch သတင်းဌာနနှင့် တနင်္သာရီ ဂျာနယ်တို့တွင် အပတ်စဉ် ပုံမှန်ရေးသားနေသည့် ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် တဦး ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးရှင် အောင်လွင် (ကံပေါက်သား) က “ကုမ္ပဏီ နာမည်လည်း ထည့်မရေးထားသလို ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်အောင် လုပ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိ အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ရေးသားတင်ပြထားတာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သတ္ထုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ၏ စွန့်ပစ်ရေများကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးရပုံနှင့် ရေနေမျိုးစိတ်များ ပျက်သုဉ်းရပုံများကို ရေးသားထားသည့် ဆောင်းပါးကို တနင်္သာရီဂျာနယ် အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၄၃ တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် မေ ၁၇ ရက်က တရားရုံးမှာ စာပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
DELCO အနေဖြင့် ဆောင်းပါး တွင် ရေးသား ဖော်ပြထားချက် တချို့မှာ ကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ထားချက်များ နှင့် ကွဲလွဲချက်များ ရှိနေသည်ဟုဆိုကာ တရားစွဲဆိုခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ယင်းကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုမှု အပေါ် သတ္တု သယံဇာတ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ထောက်ပြကာ အခွင့်အရေး တောင်းဆိုသော ရပ်ရွာအခြေပြု အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ တဦးနှင့် ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် တဦးဖြစ်သူကို တရားစွဲဆိုခြင်းမှာ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ရပ်ရွာအခွင့်အရေးတို့အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတရပ်ဖြစ်ကြောင်း Dawei Watch Foundation က ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
The post သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို ဝေဖန်ရေးသားသည့် ဆောင်းပါးရှင် တရားစွဲခံရ appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1OPV5c3 http://ift.tt/1OYtTeJ